Paul's Letter to the Hebrews – 2trondro
Home / Baiboly / Epistily / Paul's Letter to the Hebrews
1:1 Any amin'ny toerana maro sy amin'ny fomba maro, in fahiny, Andriamanitra niteny tamin'ny ray ny alalan 'ny Mpaminany;
1:2 Farany, tamin'izany andro izany dia, izay nolazainy amintsika amin'ny alalan'ny Zanaka, izay voatendry ho mpandova ny zava-drehetra, ary amin'ny alalan'ny izay nanao izao tontolo izao.
1:3 Ary satria ny Zanaka no famirapiratan'ny voninahiny, ary ny tarehimarika ny fananany, ary mitondra ny zavatra rehetra araka ny Teny ny hatsaran-toetra, amin 'izany no nolazainy mba hahadio ny fanatanterahana ny fahotana, dia mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'ny Lehibe any amin'ny avo.
1:4 Ary rehefa natao natao tsara noho ny anjely, ny nandovany anarana be dia be lehibe noho azy ireo.
1:5 Fa anjely iza no mba efa nilazany hoe: "Ianao no Zanako; ankehitriny Izaho niteraka anao?"Na indray: "Izaho ho Rainareo ho azy, ary izy ho ny Zanaka ho ahy?"
1:6 Ary indray, raha mitondra ny lahitokana ho amin'izao tontolo izao, hoy izy: "Ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra mankafy azy Andriamanitra."
1:7 Ary ny amin'ny anjely, Azo antoka fa, hoy izy: "Manao ny anjeliny ho fanahy, Ary ny mpanompony ho lelafo. "
1:8 Fa ny Zanaka: "Ny seza fiandriananao, Andriamanitra ô, dia mandrakizay doria. Ny tehim-panjakana ny ny fanjakanao dia tehim-pahamarinana.
1:9 Efa tia rariny, ary efa halanao ny heloka. Noho io, Andriamanitra, Andriamanitrao, efa nanoso-diloilo fifaliana, mihoatra noho ny namany. "
1:10 Ary: "Tany am-piandohana, Tompo O, no nanorina ny tany. Ary ny lanitra ny asan'ny tananao.
1:11 Ireo ho levona, fa ianareo dia hijanona. Ary ny olona rehetra ho rovitra toy ny fitafiana.
1:12 Ary ianao dia hanova azy toy ny lamba, ka hovana izy. Kanefa ianareo efa sendra mitovy, ary ny taonanao tsy hihena. "
1:13 Fa anjely iza no mba efa nilazany hoe: "Mipetraha eto ankavanako, Ambara ho fahavalonao ho fitoeran-tongotrao ny?"
1:14 Moa tsy fanahy rehetra amin'ny fanompoana, nalefa tany amin'ny fanompoam-pivavahana noho ny ireo izay dia handray ny lova ny famonjena?
2:1 Izany no antony, tsy maintsy ho antsika hitandrina tsara kokoa izay efa rentsika, andrao isika aoka solafaka ny lasa.
2:2 Fa raha ny teny nampilazaina ny anjely natao mafy orina, ary ny fandikan-dalàna sy ny tsy fankatoavana dia nandray ny valiny marina famaizana,
2:3 Ahoana no mety ho afa-mandositra, raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao? Fa na dia efa nanomboka tamin'ny voalohany mba ho nilaza ny Tompo, dia noraisina ho mpikambana eo anivontsika 'ireo izay nandre azy,
2:4 miaraka satria Andriamanitra no nanambara izany tamin'ny famantarana sy zava-mahagaga, ary ny fahagagana maro samihafa, ary ny fanariana ny Fanahy Masina, araka ny sitrapony.
2:5 Fa Andriamanitra tsy nanaiky ny ho avy izao tontolo izao, momba izay lazainay, amin'ny anjely.
2:6 fa ny olona, tao amin'ny fitoerana iray, dia nijoro ho vavolombelona, nanao hoe:: "Inona moa ny olona, fa ianao no ahatsiarovanao azy, na ny Zanak'olona, fa hitsidika azy?
2:7 Efa mihena azy ho kely noho ny anjely. Efa nosatrohanao voninahitra sy fiandrianana, ary efa hanendry azy hanapaka ny asan'ny tananao.
2:8 Efa nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony. "Fa araka izay efa nampanaiky ny zavatra rehetra ho Azy, efa namela na inona na inona tsy manaiky azy. Fa amin'ny andro ankehitriny izao, tsy mbola mahazo fa ny zavatra rehetra dia efa nampanekena Azy.
2:9 Nefa takatsika fa Jesosy, izay nihena ho kely noho ny anjely, nisy satroboninahitra voninahitra sy haja noho ny fijaliana sy ny fahafatesana, mba, noho ny fahasoavan'Andriamanitra, mba hanandrana fahafatesana hamonjy ny rehetra.
2:10 Fa miendrika ho azy, noho ny izay sady nahariana ny zavatra rehetra misy, izay efa nitondra ny ankizy maro ho voninahitra, mba hamita ny nanoratra ny famonjena amin'ny alalan'ny fijaliany.
2:11 Fa izay manamasina, ary ireo izay efa nohamasinina, rehetra avy amin'ny iray. Izany no antony, izy, dia tsy mahamenatra Azy hanao ireo rahalahy, nanao hoe::
2:12 "Izaho no hanambara ny anaranao amin'ny rahalahiko. Teo afovoan'ny ny Fiangonana, No hiderako anao. "
2:13 Ary indray: "Izaho ho mahatoky ao aminy." Ary koa: "Indro, Izaho sy ny zanako, Izay efa nomen'Andriamanitra ahy. "
2:14 Noho izany, satria ny ankizy manana nofo aman-drà iraisana, tenany koa, toy izany, efa nandray anjara tamin'ny mitovy, mba ho amin'ny fahafatesana, mba handringanany izay nihazona ny fanjakana ny fahafatesana, izany hoe, ny devoly,
2:15 ary toy izany koa mba hanafaka ireo izay, ny alalan 'ny tahotra ny fahafatesana, efa voaheloka ho andevo mandritra ny fiainany manontolo.
2:16 Fa amin'ny tsy misy ny fotoana no hihazona ny anjely, nefa kosa dia nihazona ny taranak'i Abrahama.
2:17 Noho izany, dia tsara ho azy mba hatao toy izany koa ny rahalahiny amin'ny zavatra rehetra, ka dia mba ho tonga mamindra fo sy mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra Mpisoronabe, Amin'izay izy mba hitondra famelan-keloka ho amin'ny fandikan-dalàna ny olona.
2:18 Fa in toraka izay no efa nijaly sy efa nalaim-panahy, Izy koa dia afaka ny hanampy ireo izay alaim-panahy.
3:1 Noho izany, ry rahalahy masina, mpandray anjara amin'ny fiantsoana ny any an-danitra, hevero ny Apostoly sy Mpisoronabe Izay ekentsika: Jesosy.
3:2 Izy no mahatoky Ilay nanao azy, tahaka an'i Mosesy koa, ny trano iray manontolo.
3:3 Noho izany Jesosy Noheverina miendrika hanam-boninahitra noho Mosesy lehibe kokoa, loatra ka ny trano izay efa nanao manana voninahitra bebe kokoa noho ny teo aloha ny iray.
3:4 Fa ny trano rehetra dia nanorina ny olona iray, fa Andriamanitra dia Ilay efa nahary ny zava-drehetra.
3:5 Ary azo antoka fa i Mosesy dia nahatoky, ny trano iray manontolo, Toy ny mpanompo, ho vavolombelona amin 'ireo zavatra izay tsy ho ela lazaina.
3:6 Na izany aza tena, I Kristy dia tahaka ny Zanaka tao an-tranony. Izany trano izany izahay, raha mitana mafy ny tsy fivadihany sy ny voninahitry ny fanantenana, hatramin 'ny farany.
3:7 Noho io, lanitra koa dia toy ny lazain'ny Fanahy Masina: "Raha amin'izao andro izao renareo ny feony,
3:8 Aza manamafy ny fonareo, tahaka ny tamin'ny fahasosorana, ny andro ny fakam-panahy, any an-efitra,
3:9 izay naka fanahy Ahy ny razanareo, na dia efa hitany, ary nandinika ny asa efa-polo taona.
3:10 Izany no antony, Tezitra aho ity taranaka ity, ka hoy izaho:: Lalan-diso izy ireo mirenireny foana am-po. Fa izy ireo tsy mahalala ny lalako.
3:11 Noho izany dia tahaka ilay nianianako tamin'ny fahatezerako: Tsy hiditra amin'ny fitsaharako!"
3:12 mitandrina, rahalahy, fandrao angamba dia mety hisy, na inona na inona aminareo, ny fo ratsy tsy mino, mifady ny Andriamanitra velona.
3:13 Fa tsy, mifananara isan'andro, raha mbola atao hoe 'amin'izao andro izao,'Ka tsy hisy aminareo ho tonga mafy fo noho ny fahadisoana rehetra ny fahotana.
3:14 Fa efa natao mpandray anjara ao amin'i Kristy. Izany no ho lasa, raha mitana mafy ny fiandohan'ny ny fananany, hatramin 'ny farany.
3:15 Fa voasoratra hoe:: "Raha amin'izao andro izao renareo ny feony, Aza manamafy ny fonareo, ao amin 'ny fomba toy ny tamin'ny teo aloha fihantsiana. "
3:16 Ho an'ny sasany izay mihaino no mampahatezitra Azy. Tsy ny rehetra anefa ireo efa niainga avy tany Egypta tamin'ny alalan'i Mosesy.
3:17 Ary hanohitra an'iza no nahatezitra Azy efa-polo taona? Moa tsy ireo izay nanota, izay nandry niankohoka faty any an-efitra?
3:18 Fa iza no nianianany fa tsy hiditra izy ireo any amin'ny fitsaharany, afa-tsy ho an 'ireo izay tsy tena nino?
3:19 Ary noho izany, dia takatro fa izy ireo tsy nahazo niditra noho ny tsy finoana.
4:1 Noho izany, tokony hatahotra, fandrao ny teny fikasana ny hiditra any amin'ny fitsaharany dia mety ho niala tsy, ary ny sasany aminareo dia mety hotsaraina ho tsy ampy.
4:2 Noho izany dia nambara tamintsika ao amin'ny toy izany koa izy ho toy ny azy ireo. Fa ny fihainoana fotsiny ny teny dia tsy soa ho azy ireo, satria tsy tafakambana tamin'ny finoana ireo zavatra izay reny.
4:3 Fa isika izay nino no miditra amin'izany fitsaharana, ao amin'ny fomba iny ihany araka izay nolazainy: "Koa izany dia tahaka ny nianianako tamin'ny fahatezerako: Tsy hiditra amin'ny fitsaharako!"Ary tokoa, izany dia rehefa ny asa hatry ny fanorenana izao tontolo izao no vita.
4:4 Fa, tao amin'ny fitoerana iray, nolazainy momba ny andro fahafito toy izany: "Ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny andro fahafito amin'ny asany rehetra."
4:5 Ary eto amin'ity toerana ity indray: "Tsy hiditra amin'ny fitsaharako!"
4:6 Noho izany, izany dia satria ny sasany mbola izay ho tafiditra aminy akory, ary ireo izay nambara voalohany dia tsy ho tafiditra aminy akory, noho ny tsy finoana.
4:7 Indray, dia mametra andro anankiray, rehefa be dia be ny fotoana, nanao tamin'ny David, "Androany,"Fotsiny araka izay voalaza etsy ambony, "Raha amin'izao andro izao renareo ny feony, Aza manamafy ny fonareo. "
4:8 Fa raha Josoa no nanolotra azy fitsaharana, izy fa tsy efa niteny, rehefa afaka izany,, momba ny andro hafa.
4:9 Ary noho izany, mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra.
4:10 Fa na iza na iza no niditra tao amin'ny fitsaharany, izany ihany koa no nitsahatra tamin'ny asany, tahaka an'Andriamanitra tamin'ny Azy.
4:11 Noho izany, aoka isika maika ny hiditra ao amin'izany fitsaharana izany, mba tsy hisy ho latsaka ao amin'ny tsi-finoana tahaka izany koa ny.
4:12 Fa ny Tenin'Andriamanitra no velona sy mahomby: tevika kokoa noho ny sabatra roa lela, mipaka amin'ny fisarahana na dia eo amin'ny fanahy sy ny fanahy, na dia eo ny tonon-taolana sy ny tsoka, ary dia toy izany mahay manavaka ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo.
4:13 Ary tsy misy zavatra ary rehetra izao izay tsy hita ny eo imasony. Fa ny zavatra rehetra dia mihanjahanja sy misokatra ho azy ny mason'ny, momba izay isika miteny.
4:14 Noho izany, satria isika manana Mpisoronabe lehibe, izay no nitomboka ny lanitra, Jesosy ny Zanak'Andriamanitra, dia tokony hanao ho ekentsika.
4:15 Fa isika tsy manana mpisoronabe izay tsy mahay hamindra fo eo amin'ny fahalementsika, fa aleo izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra, tahaka antsika, kanefa tsy nanana ota.
4:16 Noho izany, aoka isika handeha amin'ny fahasahiana eo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana, ka mba hahazoantsika famindram-po, sy hahitantsika fahasoavana, amin'ny fotoana manampy.
5:1 Fa ny mpisoronabe rehetra, rehefa alaina amin'ny olona, voatendry amin'ny anaran'ny olona izay manandrify ny zavatra momba an'Andriamanitra, ka mba hanatitra fanomezana sy fanatitra amin'ny anaran'ny-keloka;
5:2 izay tratry ny commiserate amin'izay tsy mahalala sy izay mirenireny amin'ny lalan-diso, satria ny tenany koa voahodidin'ny fahalemena.
5:3 Ary noho izany, izy koa dia tsy maintsy manao toy izany na dia fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany, ao amin 'ny fomba Fa ny amin'ny olona.
5:4 Ary tsy misy handray izany voninahitra izany ny tenany, fa aleo izay efa niantsoana ny Andriamanitra, tahaka Arona.
5:5 Dia toy izany no, Kristy aza tsy nitady voninahitra ny tenany, mba ho Mpisoronabe, fa raha tokony, fa Andriamanitra no nanao taminy: "Ianao no Zanako. Ankehitriny izaho no niteraka anao. "
5:6 Ary toy izany koa, Hoy izy eo amin'ny teny hafa: "Hianao no Mpisorona mandrakizay, araka ny fanaon'i Melkizedeka. "
5:7 Dia i Kristy izay, Tamin'ny andron'ny nofony, amin'ny fitarainana mafy sy ny ranomaso, nanolotra fivavahana sy fangatahana ho an'ny Iray tamin'Ilay nahay namonjy azy tsy ho faty, ary izay re noho ny fanajana.
5:8 Ary na dia, Azo antoka fa, Izy no ilay Zanak'Andriamanitra, dia nianatra fanarahana tamin'izay zavatra niaretany.
5:9 Ary rehefa tonga ny consummation, dia nataony, ho an'izay rehetra mankatò azy, ny antony mahatonga ny famonjena mandrakizay,
5:10 rehefa nantsoin 'Andriamanitra ho mpisorombe, araka ny fanaon'i Melkizedeka.
5:11 Ny hafatra momba azy lehibe, ary sarotra ny manazava rehefa miresaka, satria efa natao reraka, rehefa mihaino.
5:12 Fa na dia no fotoana rehefa tokony ho efa mpampianatra, ianao dia mbola tsy ampy, ka tsy maintsy hampianarina ny zavatra izay singa fototra ao amin'ny Tenin'Andriamanitra, ary mba efa tonga tahaka ireo izay mila ronono, fa tsy ventin-kanina.
5:13 Fa na iza na iza no mbola nandrasana amin'ny ronono dia mbola unskillful ao amin'ny Tenin'ny Justice; Fa Izy dia tahaka ny zazakely.
5:14 Fa ny ventin-kanina dia ho an'ny olona matotra, ho an'ireo izay, amin'ny alalan'ny fampiharana, mandranitra ny saina, ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy.
6:1 Noho izany, manapaka fanazavana ny fototry ny Kristy, dia aoka isika handinika izay efa mandroso kokoa, tsy manolotra ny fototra indray, dia fibebahana hahafahana amin'ny asa maty, ary ny finoana an'Andriamanitra,
6:2 ny fotopampianaran'ny batisa, ary koa ny fametrahan-tanana, sy ny fitsanganana amin'ny maty, sy ny fitsarana mandrakizay.
6:3 Ary izahay, no hanao izany, raha mamela izany Andriamanitra tokoa.
6:4 Fa azo atao ho an 'ireo izay nanazava indray mandeha, ary dia nanandrana ny fanomezana avy any an, ary hanan-javatra iombonana ao amin'ny Fanahy Masina,
6:5 izay, na dia eo aza efa nanandrana ny teny tsaran'Andriamanitra sy ny herim-panahy ao amin'ny taona ho avy, tsy mbola lavo,
6:6 havaozina indray ho amin'ny fivalozana, satria izy ireo crucifying indray tao amin'ny tenany ny Zanak 'Andriamanitra, ary mbola mihazona pretenses.
6:7 Fa ny tany manaiky fitahiana avy amin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fisotroana ny ranonorana milatsaka matetika eo aminy, ary mamokatra zavamaniry izay mahasoa ireo iza izany ho any Nambolena.
6:8 Fa na inona na inona miteraka tsilo sy songosongo kosa dia lavina, ary akaiky ny zavatra voaozona; ny consummation ao setroka.
6:9 Fa avy aminao, tena malala, Matoky isika fa hisy zavatra tsara kokoa sy akaiky kokoa ny famonjena; na dia miteny toy izany.
6:10 Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina, izany fa hanadino ny asanareo sy ny fitiavana fa nasianao amin'ny anarany. Fa efa nanompo, ary mbola hanao fanompoam-pivavahana, mamangy ny olona masina.
6:11 Nefa mbola irinay fa samy ianareo dia asehoy izany solicitude nanatrika ny fahatanterahan'ny fanantenana, hatramin 'ny farany,
6:12 mba tsy ho mora ny manao zavatra, fa kosa mety ho hanahaka ireo, amin'ny alalan'ny finoana sy ny faharetana, no handova ny teny fikasana.
6:13 Fa Andriamanitra, amin'ny fanaovana fampanantenana tamin'i Abrahama, dia nianiana tamin'ny tenany, (satria tsy nisy lehibe noho izay mety mianiana),
6:14 nanao hoe:: "Fitahiana, Dia hitahy anao aho, ary hahamaro, Dia hahamaro anao aho. "
6:15 Ary toy izany, rehefa miaritra amim-paharetana, dia nahazo ny teny fikasana.
6:16 Fa ny olona dia mianiana amin'izay lehibe noho ny tenany, ary ny fianianana toy ny fandraisana ho mpikambana dia ny fahataperan'izao ny adihevitra rehetra.
6:17 Ao izany zavatra izany, Andriamanitra, te hanambara bebe kokoa ny tsi-fiovan'ny sitrapony tsara ny toroheviny ho an'ny mpandova ny teny fikasana, interposed nianiana,
6:18 ka mba ho zavatra roa loha tsy mety miova ny zavatra, izay tsy hain'Andriamanitra andaingana, mba manana ny matanjaka fampiononana: isika izay niara-nandositra, mba mihazona mafy ny fanantenana napetraka eo anoloantsika,.
6:19 Izany ananantsika ho vatofantsiky ny aina, soa aman-tsara, izay mandroso hatrany amin 'ny afovoan-efitra lamba,
6:20 ho any amin'ny toerana izay ny mpialoha lalana i Jesosy no niditra ho antsika, ka ho tonga ny mpisoronabe mandrakizay, araka ny fanaon'i Melkizedeka.
7:1 Noho izany Melkizedeka, mpanjakan'i Salema, mpisoron'ilay Andriamanitra Avo Indrindra, nitsena an'i Abrahama,, raha mbola, rehefa niverina avy nandresy ny mpanjaka maro, ary nitso-drano azy.
7:2 Ary Abrahama ny azy ny ampahafolon'ny zavatra rehetra. Ary tamin'ny fandikan-teny ny anarany aloha, tokoa, mpanjakan'ny rariny, ary manaraka koa dia mpanjakan'i Salema, izany hoe, Mpanjakan'ny fiadanana.
7:3 tsy manan-dray, tsy manan-dreny, tsy ny firazanany avy, manana na fiandohan 'andro, na faran'ny fiainana, izy amin 'izany toy ny Zanak'Andriamanitra, izay mitoetra ho mpisorona hatrany.
7:4 Manaraka, hevero ny halehiben'io io lehilahy io, satria Abrahama patriarka ny fahafolon-karena mihitsy aza nanome ho azy avy amin'ny zavatra lehibe indrindra.
7:5 ary tokoa, ireo izay avy tamin'ny taranak'i Levy,, satria nandray ny fisoronana, hanao teny haka ny fahafolon-karena amin'ny olona araka ny lalàna, izany hoe, amin'ny rahalahiny, na izy ireo koa mba niakatra avy teraky ny kibon'i Abrahama.
7:6 Fa Izy kosa, izay rohim-pirazanana tsy tanisaina aminy, nandray ny fahafolon-karena tamin'i Abrahama, Dia nitso-drano mihitsy aza ilay nanao ny teny fikasana.
7:7 Kanefa izao no tsy misy mifanohitra, fa inona no tsy tokony ho voatahy ny zavatra tsara kokoa.
7:8 Ary azo antoka fa, Eto, lehilahy izay mandray ny fahafolon-karena mbola ho faty; nefa tsy, dia mijoro ho vavolombelona fa velona.
7:9 Ary dia toy izany no azo lazaina fa Levy aza, izay nandray ny fahafolon-karena, dia tenany ho ampahafolon-karena tamin'ny alalan'i Abrahama.
7:10 Fa Izy mbola tao an-kibon-drainy, rehefa nifanena taminy i Melkizedeka.
7:11 Noho izany, raha consummation nitranga tamin'ny fisoronan'i Levy (fa tamin'izany no nahazoan'ny olona ny lalàna), dia ahoana no mbola ilana mety hisy mpisorona hafa hitsangana araka ny fanaon'i Melkizedeka, iray izay tsy voantso araka ny fanaon'i Arona?
7:12 Fa satria ny fisoronana dia nafindra, dia ilaina ny lalàna koa nafindra.
7:13 Fa iza izany zavatra izany dia efa nolazaiko dia avy tamin'ny firenena hafa, izay tsy misy olona manatrika eo anoloan'ny alitara.
7:14 Fa hita marimarina fa ny Tompo nitsangana ho eo amin'ny Joda, firenena iray momba izay na inona na inona momba hoy Mosesy: mpisorona.
7:15 Kanefa dia miharihary fa lavitra kokoa, araka ny endriky ny Melkizedeka, misy mitsangana mpisorona hafa,
7:16 Ilay natao, tsy araka ny lalàna didy momba ny nofo, fa araka ny herim-panahy iray ny fiainana indissoluble.
7:17 Fa ambarany: "Hianao no Mpisorona mandrakizay, araka ny fanaon'i Melkizedeka. "
7:18 tokoa, misy toerana manokana ny didy teo aloha, noho ny halemeny sy ny tsy fisian'ny ilaina.
7:19 Fa ny lalàna dia tsy misy olona nitarika ny tonga lafatra, nefa tena dia nampiditra fanantenana tsaratsara kokoa, ny alalan 'izay manatona an'Andriamanitra.
7:20 Koa, dia tsy tsy tamin'ny fianianana. Fa tokoa, ny olon-kafa natao mpisorona tsy tamin'ny fianianana.
7:21 Fa Izy kosa dia natao mpisorona tamin'ny fianianana, ny iray izay nilaza taminy: "Efa nianiana Jehovah ka tsy hanenina. Hianao no Mpisorona mandrakizay. "
7:22 Dia tahaka izany koa, I Jesosy no nanao ny mpanohana ny fanekena tsara lavitra.
7:23 Ary azo antoka fa, dia maro tamin 'ny olon-kafa, satria lasa mpisorona, noho ny fahafatesana, voarara izy ireo haharitra.
7:24 Fa Izy kosa, satria mitohy mandrakizay, dia manana fisoronana mandrakizay.
7:25 Ary noho izany antony, Izy dia mahatahiry, hatrany, mba hamonjy ireo izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany, satria izy velona mandrakizay hanao fifonana ho antsika.
7:26 Fa miendrika fa tokony hanana toy izany Mpisoronabe: masina, tsy manan-tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanota, ary nanandratra avo noho ny lanitra.
7:27 Ary tsy mila, isan'andro, ao ny fanaon'ny mpisorona hafa, mba hanolotra sorona, voalohany noho ny otan'ny tenany, ary avy eo dia ho an 'ireo ny olona. Fa Izy no nanao izany indray mandeha, amin'ny fanatitra ny tenany.
7:28 Fa ny lalàna dia manendry olona ho mpisorona, na dia manana aretina. Fa, araka ny tenin'ny fianianana kosa, izay araka ny lalàna, ny Zanaka dia Izay notanterahina ho mandrakizay.
8:1 Ary ny hevi-dehibe ao amin'ny zavatra izay efa voalaza dia izao: fa manana lehibe Mpisoronabe, izay mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra Lehibe any an-danitra,
8:2 izay ny minisitry ny zava-masina, sy ny tena tabernakely, izay napetraky ny Tompo, fa tsy amin'ny olona.
8:3 Fa ny mpisoronabe rehetra dia tendrena hanatitra fanomezana sy fanatitra. Noho izany, dia ilaina ho azy ihany koa mba manana zavatra mba hanolotra.
8:4 Ary noho izany, raha teo an-tany, dia tsy ho mpisorona, satria hisy olon-kafa mba manatitra ny fanomezana araka ny lalàna,
8:5 fanomezam-pahasoavana izay hiasa ho toy ny ohatra fotsiny sy aloky ny zavatra any an-danitra. Ary dia toy izany no namaly an'i Mosesy, fa efa tokony mba hamita ny tabernakely: "Jereo izany," hoy izy, "Mba hanao ny zava-drehetra, araka ny ohatra izay nambara taminao tao an-tendrombohitra."
8:6 Fa ankehitriny Izy efa nomena ny asa fanompoana tsara kokoa, loatra ka dia ihany koa ny Mpanalalana amin'ny fanekena tsara lavitra, izay efa nohamafisin'ny teny fikasana tsara lavitra.
8:7 Fa raha ny iray teo aloha efa tanteraka tsy manan-tsiny, Avy eo dia nisy toerana azo antoka dia tsy mba hotadiavina ho an'ny ny manaraka indray.
8:8 Fa, manome tsiny ny olona, hoy izy: "Indro, ny andro izany dia tonga, hoy Jehovah, raha Izaho no tanterak'i ny New Testament ny taranak'Isiraely sy ny taranak'i Joda,
8:9 Nefa tsy araka ny fanekena izay nataoko tamin'ny razany, tamin'ny andro nitondrako azy ny tanana, ka mba hitondra azy avy any amin'ny tany Egypta. Fa tsy hitoetra amin'ny testamenta, ary noho izany dia tsy niraharaha azy ireo, hoy Jehovah.
8:10 Fa izao no fanekena hataoko eo anoloanareo ny mpianakavin 'i Isiraely, Rehefa afaka izany andro, hoy Jehovah. Dia mampianatra ny lalàko ao an-tsainy, ary dia soraty ny lalàko ao am-pony. Ary noho izany, Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko.
8:11 Ary dia tsy hampianatra, samy ny namany, ary samy ny rahalahiny, nanao hoe:: 'Mahalalà an'i Jehovah.' Fa hahalala Ahy rehetra, na ny kely, na ny lehibe, dia.
8:12 Fa havelako ny helony, ary dia tsy hahatsiaro intsony ny fahotany. "
8:13 Ary amin'ny hoe zava-baovao, dia nataony fa efa ela ny teo aloha. Fa lo izy io ary antitra dia manakaiky ny mandalo.
9:1 tokoa, ny teo aloha koa ny fanamarinana ny fanompoam-pivavahana sy ho tany masina hasiana ny taona.
9:2 Fa nisy tabernakely natao tamin'ny voalohany, izay nisy ny fanaovan-jiro, ary ny latabatra, ary ny mofo aseho, izay atao hoe masina.
9:3 Avy eo, any an-dafin'ny anatin'ny efitra lamba faharoa, dia ny tabernakely, izay atao hoe ny Masina Indrindra,
9:4 izay nisy lovia volamena lovia, ary ny fiaran'ny fanekena, manenika ny tenany rehetra manodidina, ary tamin'ny zavatra rehetra: ny sasany kosa nomba volamena, izay dia volamena misy mana urn, ary ny tehin'i Arona, izay efa nandroso,, ary ny vato fisaka nisy ny fanekena.
9:5 Ary ny nifehy ny sambo-fiara dia ny kerobima nisy ny voninahitra,, izay nanaloka ny fampihavanana. Tsy misy tsy ampy ny miresaka momba ny fotoana tsirairay izany zavatra izany.
9:6 Na izany aza tena, indray mandeha izany zavatra izany dia napetraka miara-, ao amin'ny tapany voalohany amin'ny tabernakely, ny mpisorona no, tokoa, miditra mandrakariva, mba hanatanteraka ny andraikitry ny sorona.
9:7 Fa ny faharoa anjara, indray mandeha isan-taona, ny idiran'ny mpisoronabe irery ihany niditra, tsy misy ra, Izay nateriny ho an'ny fahadisoana ny tsirambina ny tenany sy ny vahoaka.
9:8 Amin'izao fomba izao, ny Fanahy Masina dia midika fa ny fomba ny zavatra masina dia masina tsy mbola voaseho, Tsy amin'ny tabernakely voalohany mbola mijoro.
9:9 Ary izao no fanoharana ho an'ny andro ankehitriny izao. Koa, ireo fanomezana sy fanatitra izay aterina tsy afaka, toy ny ahiahy ny feon'ny fieritreretana, mba ho tanteraka ireo zavatra izay manompo afa-tsy toy ny sakafo sy ny zava-pisotro,
9:10 ary koa ny fanasana samy hafa sy ny mpitsara ny nofo, izay nampanompoany azy mandra-pihavin'ny andro fanitsiana.
9:11 fa Kristy, mijoro ho toy ny mpisorombe ny zavatra tsara ho avy, ny alalan 'ny lehibe lavitra sady tsara lavitra tabernakely, Tsy iray atao amin'ny tanana, izany hoe, tsy isan'izao zavatra ary izao,
9:12 niditra indray mandeha ho any amin'ny Masina Indrindra, ka nahazo fanavotana mandrakizay, na amin'ny ny ran'osilahy, na ny zanak'omby, fa ny ran'ny tenany.
9:13 Fa raha ny ran'osilahy sy ny omby, ary ny lavenom-ombilahy kely, rehefa izany dia natopiny, manamasina ireo izay efa voaloto, mba hanadio ny nofo,
9:14 mainka fa ny ran'i Kristy, Izay ny alalan 'ny Fanahy Masina dia nanatitra ny tenany, immaculate, ho an'Andriamanitra, hanadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty, mba hanompoanareo an'Andriamanitra velona?
9:15 Ary dia toy izany no Mpanelanelana amin'ny fanekena vaovao, amin'izay mba, amin'ny fahafatesany, dia fifonany ho fanavotana ireo fandikan-dalàna izay teo ambanin'ny fanekena taloha, ka dia ireo izay voantso mba handray ny teny fikasana, dia ny lova mandrakizay.
9:16 Fa izay misy ny fanekena, dia ilaina ho an'ny maty ny no manambara hiditra an-tsehatra.
9:17 Fa ny fanekena dia nanamarina ny fahafatesana. Raha tsy izany, dia mbola tsy misy hery, raha mbola ny no manambara fiainana.
9:18 Noho izany, tokoa, Ny voalohany dia tsy nohamasinina raha tsy nisy ra.
9:19 Fa raha ny didy rehetra ny lalàna efa namaky an'i Mosesy ho amin'ny olona manontolo, dia nalainy ny ran-janak'omby sy ny ran'osilahy, amin'ny rano sy ny volon'ondry jaky sy ny hysopa, ka nafafiny tamin'ny boky sy ny vahoaka manontolo,
9:20 nanao hoe:: "Ity no ran'ny fanekena izay efa nandidian'i ho anao."
9:21 Ary na dia ny tabernakely, ary ny fanaka rehetra amin'ny fanompoana, dia nofafazany rà toy izany koa.
9:22 Ary efa ho ny zava-drehetra, araka ny lalàna, dia tokony diovina amin'ny ra. Ary tsy ny fandatsahan-dra, tsy misy famelan-keloka.
9:23 Noho izany, dia ilaina ho amin'ny ohatra ny any an-danitra ny zavatra hodiovina, toy ny, tokoa, izany zavatra izany dia. Na izany aza ny any an-danitra ny tenany zavatra fanatitra tsara noho ireny.
9:24 Fa i Jesoa dia tsy hiditra amin'ny alalan'ny zavatra masina nataon-tanana, ohatra fotsiny ny tena zava-, fa niditra tao an-danitra tokoa, ka mba hiseho ankehitriny eo anatrehan'Andriamanitra ho antsika.
9:25 Ary tsy niditra mba hanatitra ny tenany matetika, tahaka ny mpisoronabe miditra ao amin'ny Masina Indrindra isan-taona, amin'ny ran'ny hafa.
9:26 Raha tsy izany, dia ho tokony ho niaritra imbetsaka hatramin'ny fiandohan 'izao tontolo izao. Fa ankehitriny, indray mandeha, teo am-consummation-potoanan'Andriamanitra, dia efa niseho mba handrava ny fahotana na ny sorona.
9:27 Ary ao amin 'ny fomba araka ny efa voatendry ho faty ho an'ny olona iray ny fotoana, ary rehefa afaka izany,, mba hotsaraina,
9:28 dia tahaka izany koa Kristy dia nanolotra, indray mandeha, mba entana ao fahotan'ny maro. Dia hiseho fanindroany, tsy amin'ota, ho an'ireo izay miandry azy, ho famonjena.
10:1 Fa ny lalàna dia mirakitra ny aloky ny zava-tsoa ho avy, tsy ny tena endrik'izany izany zavatra izany. Noho izany, ny tena amin'izay fanatitra izay ateriny ceaselessly isan-taona, izy ireo dia tsy mahatonga ireo mba hanatona tonga lafatra.
10:2 Raha tsy izany, izy ireo dia ho nitsahatra va ny nanaterany, satria ny mpivavaka, nodiovina indray mandeha, dia tsy ho mahatsapa misy ota.
10:3 Fa tsy, in ireo zavatra ireo, ny fahatsiarovana ny ota isan-taona no atao.
10:4 Fa tsy azo noho ny ota ho nesorina noho ny ran'i ny omby sy ny osy.
10:5 Izany no antony, tahaka an'i Kristy miditra eo amin'izao tontolo izao, hoy izy: "Fanatitra alatsa-drà sy ny fanatitra hohanina, Tsy tianao. Fa ianao kosa efa namboatra vatana ho ahy ianao.
10:6 Sorona dorana noho ny ota tsy mampifaly anao.
10:7 Dia hoy izaho:, 'Indro, I manatona. 'Amin'ny lohan'ny boky, efa nanoratana ahy mba hanao ny sitraponao, Andriamanitra ô. "
10:8 Ao amin'ny etsy ambony, amin'ny hoe:, "Sorona, fanatitra hohanina sy fanatitra, ary ny sorona dorana noho ny ota, Tsy tianao, na dia ireo izay sitrany ho anao, dia ireny aterina araka ny lalàna;
10:9 Dia hoy izaho:, 'Indro, Aho tonga hanao ny sitraponao, Andriamanitra ô,' "Manaisotra ny voalohany, ka mba haoriny ny zavatra manaraka.
10:10 Fa izany sitrapon'Andriamanitra, izany no nanamasinana, ny alalan 'ny indray mandeha fanatitra ny tenan'i Jesosy Kristy.
10:11 Ary azo antoka fa, ny mpisorona rehetra mitsangana amin'ny, fanompoam-pivavahana isan'andro, ary matetika fanatitra amin'izay fanatitra, izay tsy afaka hanaisotra ny ota.
10:12 Fa Izy kosa, manolotra fanatitra noho ny ota ny iray, mipetraka eo an-kavanan'Andriamanitra 'Andriamanitra mandrakizay,
10:13 miandry andro izany, nony ny fahavalony ho fitoeran-tongony.
10:14 Fa, fanatitra iray, efa nentiny ho tanteraka, ho an'ny fotoana rehetra, ireo izay nohamasinina.
10:15 Ary ny Fanahy Masina koa manambara ho antsika momba izany. Fa rehefa afaka izany,, hoy izy::
10:16 "Ary izao no fanekena izay dia hanolo-tena aminy, Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah. Dia mampianatra ny lalàko ao am-pony, ary dia soraty ny lalàko an-tsainy.
10:17 Ary dia tsy hahatsiaro intsony ny fahotany sy ny helony. "
10:18 Ankehitriny, rehefa misy famelana ireo zavatra, tsy misy intsony fanatitra hohanina noho ny ota.
10:19 Ary noho izany, rahalahy, manam-pinoana ny fidirana ho any amin'ny Masina Indrindra noho ny ran'i Kristy,
10:20 ary amin'ny làlana vaovao sady velona, izay efa kevitra ho antsika ny efitra lamba, izany hoe, ny nofony,
10:21 ary amin'ny Mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra,.
10:22 Noho izany, dia aoka isika hanatona amin'ny fo marina sy, , rahefa feno ny finoana, rehefa fo voadio afaka amin'ny fieritreretana ratsy, ary ny vatana hoe afaka amin'ny rano madio.
10:23 Aoka hohazonintsika mafy ny fanekena ny fanantenana, mba tsy hihozongozonany, fa izay nampanantenainy mahatoky.
10:24 Ary aoka isika ho fiheverana ny hafa, mba hahatonga ny tenantsika ho ny fiantrana sy ny asa tsara,
10:25 Tsy miray ny fiangonana, toy ny sasany izay efa zatra nanao, fa fampiononana ny hafa, ary na dia mainka satria hitanareo fa manakaiky ny andro.
10:26 Fa raha manota an-tsitrapo, rehefa nahazo fahalalana tsara ny marina, tsy misy fanatitra noho ny ota sisa,
10:27 fa raha tokony, dia nisy fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana, ary mampirehitra ny fahatezeran-afo izay manimba ny fahavalony.
10:28 Raha misy olona maty noho ny manohitra ny lalàn 'i Mosesy, ary tsy nisy famindram-po naseho noho ny vavolombelona roa na telo,
10:29 mainka, araka ny hevitrao, olona dia mendrika sazy ratsy kokoa, raha efa mandia ny Zanak 'Andriamanitra, ary efa tsaboina ny ran'ny fanekena, izay efa nohamasinina, tahaka ny maloto, ary nanao zavatra miaraka amin'ny fahafaham-baraka manandrify ny Fanahin'ny fahasoavana?
10:30 Fa fantatsika fa izy efa nanao hoe:: "Ahy ny famaliana, ary Izaho no hamaly,"Ary ankoatra izany, "Ny Tompo hitsara ny vahoakany."
10:31 Zava-mahatahotra ny ho azon'ny tànan'Andriamanitra velona.
10:32 Fa tsarovy ny andro fahiny, izay, rehefa avy nohazavaina, Niaritra ny mafy ianao tolona ny fahoriana.
10:33 Ary azo antoka fa, amin'ny lalana iray, ny ompa sy ny fahoriana, ianao dia natao ho fizàhan'izao, fa amin'ny fomba hafa, dia tonga ny namany 'ireo izay ny zavatra toy izany ny fitondran-tena.
10:34 Fa na dia onena ireo izay am-ponja, ary nanaiky ny faharavoam ho matiantoka ny entana, satria fantatrareo fa manana tsara lavitra sy maharitra kokoa fananana.
10:35 Ary noho izany, tsy ho very ny hatoky, izay manana valim-pitia lehibe.
10:36 Fa tsy maintsy ho anareo mba hanam-paharetana, amin'izay mba, rehefa manao ny sitrapon'Andriamanitra, ianareo raha hahazoanareo izay lazain'ny teny fikasana.
10:37 "Fa, in vetivety, ary somary intsony, izay ho avy dia hiverina, ary dia tsy ela.
10:38 Fa ny lehilahy marina velona amin'ny finoana. Fa raha izy ireo mba hanatona ny tenany indray, dia tsy hahafaly ny fanahiko. "
10:39 Koa dia, isika fa tsy zanaka izay ho voataona ho amin'ny fahaverezana, fa isika dia zanaky ny finoana ny fiarovana ny fanahy.
11:1 Ankehitriny, ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, ny porofo ny zavatra tsy miseho.
11:2 Izany no antony, ny fahiny nomena fijoroana ho vavolombelona.
11:3 finoana, takatsika izao tontolo izao mba ho endrika araka ny Tenin'Andriamanitra, ka dia mety ho hita maso atao amin'ny tsy hita maso.
11:4 finoana, No nanateran'i Abela ho an'Andriamanitra sorona tsara lavitra noho ny an'i Kaina, ka izany no nahazo fijoroana ho vavolombelona fa izy fotsiny, ao fa nanolotra fijoroana ho vavolombelona ny fanomezam-pahasoavana. Ary ny alalan 'izany fanaovana sorona, dia mbola miteny amintsika, na dia efa maty.
11:5 finoana, Nafindra i Enoka, ka dia tsy hahita fahafatesana, ka dia tsy hita satria efa nafindra azy. Fa talohan'ny nafindra, nanana fijoroana ho vavolombelona fa nankasitrahan'Andriamanitra izy.
11:6 Fa raha tsy amin'ny finoana, dia azo atao hahazoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa na iza na iza manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, ary fa mamaly soa an'ireo mitady azy.
11:7 finoana, Noa, rehefa nanaiky valiny mikasika ireo zavatra izay tsy mbola hita, satria natahotra, namorona fiara ho famonjena ny tao an-tranony. Amin'ny alalan'ny fiara, izany no nanamelohany izao tontolo izao, ary dia naorina ny mpandova ny fahamarinana izay mitranga amin'ny finoana.
11:8 finoana, ilay antsoina hoe Abrahama nihaino, nivoaka ho any amin'ny tany izay ho azony ho lova. Ary rehefa nivoaka teny ivelany, nefa tsy fantany izay halehany.
11:9 finoana, dia nitoetra tao amin'ny tanin'ny Fampanantenana toy ny hoe tany an-tanin'olona, monina ao amin'ny zohy fialofan'ny, mbamin'isaka sy Jakoba, mpiara-mandova izany teny fikasana izany.
11:10 Fa dia miandry ny tanàna manana hentitra fanorenana, izay endrika sy ny mpanorina dia Andriamanitra.
11:11 Finoana koa, Sarah tenany, satria momba, nandray ny fahaizana hitoe-jaza taranaka, na izy lasa izay taona eo amin'ny fiainana. Fa izy nino azy ho mahatoky, izay efa nampanantenaina.
11:12 Noho io, Nisy ihany koa teraka, avy amin'ny olona iray izay tena efa toy ny maty, ny mulititude tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra, izay, tahaka ny fasika any ny moron-dranomasina, tsy hita isa.
11:13 Rehetra ireo nodimandry, manaraka ny finoana, kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana, mbola nahita azy ireo eny lavitra eny, ary niarahaba azy ireo, sy niaiky ny tenany ho vahiny sy ny vahiny eto an-tany.
11:14 Ho an'ireo izay miteny amin'ny tenany izany dia milaza fa mitady izay ho tanindrazany.
11:15 ary raha, tokoa, efa nahatsiaro ny tena toerana izay dia lasa nandeha ireo, izy ireo azo antoka fa ho tafaverina ara-potoana.
11:16 Fa ankehitriny izy ireo noana ho toerana tsara kokoa, izany hoe, an-danitra. Izany no antony, Andriamanitra dia tsy menatra hatao hoe Andriamaniny. Satria efa nanamboatra tanàna ho an'ireo Izy.
11:17 finoana, Abraham, rehefa notsapaina, nanaterany an'isaka, ka dia izay efa nandray tsara ny teny fikasana mbola nanatitra zanany lahy tokana.
11:18 izy, voalaza hoe:, "Amin'ny alalan'ny Isaac, dia ny taranakao ho nampiantso,"
11:19 Midika fa aza Andriamanitra no mahay manangana tamin'ny maty. ary dia toy izany, izy koa nametraka azy ho toy ny fanoharana.
11:20 finoana, koa, Nitsofan'isaka rano an'i Jakoba sy Esao, ny hoavy.
11:21 finoana, Jacob, tahaka ny ho faty izy, nitso-drano ny tsirairay tamin'ny taranak'i Josefa; ary ka hajaina ny tampon'i ny tehiny.
11:22 finoana, Joseph, tahaka ny ho faty izy, Nampahatsiahy ny lasa ny zanak'Israely, ka nanome didy ny amin'ny taolany.
11:23 finoana, Moses, rehefa teraka, dia niafina nandritra ny telo volana ray aman-drenin'i, satria efa hitany fa izy dia zaza tsara tarehy, ka tsy natahotra ny didin'ny mpanjaka.
11:24 finoana, Moses, rehefa mihalehibe, toerana nandà tenany ho toy ny zanaky ny zanakavavin'i Farao,
11:25 raha mifidy ho amin'ny fahoriana ny olon'Andriamanitra, fa tsy mba manana ny mahafinaritra ny fahotana nandritra ny fotoana kelikely,
11:26 tsiny ny fanaratsiana an'i Kristy ho harena lehibe noho ny rakitry ny Egyptiana. Fa nanantena fatratra ny valim-pitiany.
11:27 finoana, dia nandao Ejipta, tsy matahotra ny fankahalana ny mpanjaka. Fa Absaloma nanery tamin'ny, toy ny hoe ny mahita Izay tsy hita maso.
11:28 finoana, dia nankalaza ny Paska sy ny fandatsahana ny ran, ka dia izay nandringana ny lahimatoa fandrao hahatratra ny azy.
11:29 finoana, niampitan'izy ireo ny Ranomasina Mena, toy ny hoe nandia tany maina, nefa raha nitady azy ny Egyptiana, dia voatelina.
11:30 finoana, ny mandan'i Jeriko nirodana, rehefa avy nanodidina nandritra ny fito andro.
11:31 finoana, Rahaba, mpivaro-tena, dia tsy ho very any amin'ny tsy mahatoky, rehefa avy nandray ny mpisafo-tany tamin'ny fihavanana izy.
11:32 Ary inona no tokony lazaiko manaraka? Fa ny fotoana aza tsy ampy ho ahy ny hanome ny tantaran 'Gideona, Baraka, Samson, Jefta, David, Samuel, sy ny Mpaminany:
11:33 ireo izay, noho ny finoana, nandresy fanjakana, dia tanteraka ny rariny, nahazo teny fikasana, nakatona ny vavan'ny liona,
11:34 maty ny herisetra ny afo, afaka tamin'ny lelan-tsabatra, sitrana amin'ny aretina, naneho hery amin'ny ady, niverina ny tafiky ny hafa firenena.
11:35 Ny vehivavy nandray ny azy efa maty, amin'ny alalan'ny fitsanganana amin'ny maty. Nefa ny sasany kosa nijaly mafy sazy, tsy mbola nahazo fanavotana, ka dia izy ireo hahita fitsanganana tsara lavitra.
11:36 Marina tokoa, ny hafa dia notsapaina ny naneso sy ny kapoka, ary koa ny gadra sy tranomaizina koa.
11:37 Notoraham-bato; izy, dia lotika; izy nalaim-panahy. Miaraka amin'ny famonoana ny sabatra, izy ireo maty. Nirenireny amin'ny hoditr'ondry sy amin'ny goatskin, in tsarotra mila, in tebiteby ory.
11:38 azy, izao tontolo izao tsy miendrika, nirenireny tany an-tendrombohitra irery, amin'ny lava-tany sy ny fitriatry ny tany.
11:39 Ary izany rehetra izany, rehefa voaporofo ny fijoroana ho vavolombelona ny finoana, tsy nandray ny Fampanantenana.
11:40 Ny Providence manana zavatra tsara kokoa ho antsika, ka tsy tsy misy amintsika no dia ho tanteraka.
12:1 Koa, satria isika ihany koa dia manana be toy ny rahona ny vavolombelona aminay, hasiantsika hanesotra ny zavatra rehetra ny fahotana sy ny enta-mavesatra izay mety hanodidina antsika, ary mialoha, amin'ny faharetana, ny ady natolotra ho antsika.
12:2 Aoka isika faly mijery an'i Jesosy, tahaka ny mpanoratra sy ny fahavitan'ny ny finoantsika, izay, manana fifaliana napetraka teo anoloany, naharitra ny hazo fijaliana, miraharaha ny henatra, ary ankehitriny mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra Izy.
12:3 Koa dia, misaintsaina azy izay naharitra ny tsarotra avy amin'ny mpanota taminy, mba tsy ho reraka, mahomby amin'ny fanahinareo.
12:4 Fa ianareo tsy mbola nanohitra ho ra, raha niady tamin'ny ota.
12:5 Ary efa nanadino ny fampiononana izay milaza aminareo toy ny zanany, nanao hoe:: "Ny zanako lahy, Tsy ho vonona ny tsirambina ny famaizana 'ny Tompo. Tsy tokony ho reraka, raha rehefa niteny mafy ao aminy. "
12:6 Fa na zovy na zovy ny Tompo tia, nibedy. Ary izay zanaka rehetra manaiky, izy hamelezan'i.
12:7 Mahareta amin'ny famaizana. Andriamanitra manolotra anareo ny tenany ho zanaka. Fa aiza moa izay zanaka tsy, izay ny rainy dia tsy manitsy?
12:8 Fa raha tsy misy ny fitsipi-pifehezana izay rehetra efa hanan-javatra iombonana, dia ianao ny fanitsakitsaham-bady, ary ianareo dia tsy zanaka.
12:9 Avy eo, koa, isika dia nanana ny rain'ny nofontsika ho mpampianatra, ary ka hajaina azy ireo. Tsy tokony hankatò ny Ray ny fanahy rehetra vao mainka, ary dia ho velona?
12:10 ary tokoa, nandritra ny andro vitsivitsy, ary araka ny faniriany, torolalana antsika izy ireo. Fa manao izany ho tombontsoantsika, mba hahafahantsika mandray ny fanamasinana.
12:11 Ary famaizana rehetra, amin'ny 'izao fotoana izao, tsy toa ny fifaliana, mazava ho azy, fa ny alahelo. Fa rehefa afaka izany,, dia hamaly ny tena am-pilaminana vokatry ny rariny ho an'ireo izay lasa nampianarina azy.
12:12 Noho io, hanandratra ny kamo tanana sy ny tsirambina lohalika,
12:13 ary hanitsy ny lalana ny tongotrao, ka tsy nisy olona, raha mandringa, Mety mirenireny lalan-diso, fa kosa mety ho sitrana.
12:14 Miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. Miezaha mitady masina, tsy misy izay tsy hisy olona hahita an'Andriamanitra.
12:15 Be Manjary, fandrao misy tsy ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao hisy faka mangidy hitsimoka ka hisakana anao, ary ny azy, Mety ho voaloto ny maro,
12:16 fandrao hisy mpijangajanga na olona 'izao tontolo izao ho tahaka an'i Esao, izay, noho ny sakafo iray, nivarotra ny fizokiany.
12:17 Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany, ianao, raha ta-handova ny tso-drano, dia nolavina. Fa tsy nahita toerana ho an'ny fibebahana, na dia na dia efa nitady azy tamin-dranomaso.
12:18 Fa ianareo tsy manakaiky ny tendrombohitra azo tsapain-tanana, na ny afo mirehitra, na ny tafio-drivotra, na ny zavona, na ny oram-baratra,
12:19 na ny feon'ny trompetra, na ny feon 'ny teny. Ireo izay efa za-draharaha ireo zavatra ireo tsiny ny tenany, fandrao ny Teny holazaina aminy.
12:20 Fa izy ireo tsy afaka mitondra izay nolazainy, ary noho izany, raha misy biby aza dia ho nikasika ny tendrombohitra, Mety ho notoraham-bato.
12:21 Ary inona no hita Tena mahatahotra fa na dia hoy Mosesy:: "Izaho no raiki-tahotra, ary noho izany, Raiki-tahotra aho. "
12:22 Fa ianareo kosa efa mby akaiky an-tendrombohitra Ziona, ary ny tanànan 'ilay Andriamanitra velona, ny any an-danitra i Jerosalema, ary ny orinasa maro an'arivony anjely,
12:23 ary ny Fiangonan'ny lahimatoa, ireo izay efa voasoratra any an-danitra, ary ho an'Andriamanitra, ny Mpitsara ny olona rehetra, ary ny fanahin 'ny marina izay efa natao tanteraka,
12:24 sy amin'i Jesosy, ny Mpanelanelana ao amin'ny Testamenta Vaovao, ary ny famafazana ny ra, izay miteny tsara kokoa noho ny ran'i Abela.
12:25 Mitandrema mba tsy mandà ny Iray Izay miteny. Fa raha izay nandà azy izay niteny eto an-tany dia tsy afaka afa-mandositra, ka mainka fa isika, mety miala Ilay miteny amintsika avy any an-danitra.
12:26 Avy eo, ny feony nahatonga ny tany. Fa ankehitriny, dia manao teny fikasana, nanao hoe:: "Mbola indray fotoana bebe kokoa, fa amin'izay aho vao hifindra, tsy ny tany ihany, fa ny lanitra mihitsy. "
12:27 Ary noho izany, in nanao hoe:, "Mbola indray fotoana bebe kokoa,"Dia hoy ny famindrana ny zava-moveable zavaboary, ka dia ireo zavatra izay mety hijanona immoveable.
12:28 Dia toy izany no, ny mandray ny immoveable fanjakana, fahasoavana isika. Noho izany, noho ny fahasoavana, aoka isika ho amin'ny fanompoana, ny mahafaly an'Andriamanitra amin-tahotra sy ny fanajana.
12:29 Fa Andriamanitsika dia afo mandevona.
13:1 Enga anie pirahalahiana fiantrana ho ao aminareo.
13:2 Ary aza ho vonona hanadino fahaiza-mandray vahiny. Fa izany, olona sasany, kanefa tsy tonga saina izany, nahazo anjely tahaka ny vahiny.
13:3 Tsarovy ireo gadra, toy ny raha naiditra am-ponja aminy, ary ireo izay miaritra zava-tsarotra, toy ny raha teo amin'ny fitoerany.
13:4 Enga anie ny fanambadiana ho mendri-kaja tamin'ny lafiny rehetra, ary aoka ny fandrianan'ny mpivady ho immaculate. Fa ny mpijangajanga sy ny mpaka vadin'olona.
13:5 Aoka ny fitondran-tena tsy misy avarice; ho afa-po amin'ny izay dia nanolotra. Fa izy no nanao hoe:, "Tsy handao anao, ary tsy ambanin-javatra ianao. "
13:6 Koa dia, toky isika hoe:, "Ny Tompo no mpanampy ahy. Ka tsy hatahotra aho inona no hataon'ny olona amiko. "
13:7 Tsarovy ny mpitondra anareo, dia ireo nilaza ny tenin'Andriamanitra taminareo, izay finoana ianao toa an'i, amin'ny alalan'ny fandinihana ny tanjona ny fomba fiainany:
13:8 Jesoa Kristy, omaly sy anio; I Jesoa Kristy mandrakizay.
13:9 Aza ho voatariky ny miova na fampianarana hafahafa. Ary ny tsara indrindra ho an'ny ny fo mba ho tohanana amin'ny alalan'ny fahasoavana, fa tsy amin'ny sakafo. Fa ny farany tsy mba tahaka ilaina ho an'ireo izay nandalo azy.
13:10 Isika manana alitara: ireo izay manompo ao amin'ny tabernakely tsy manana fahefana hihinana avy aminy.
13:11 Fa ny fatin'ny biby ireo ny ran'ny nentiny ho any amin'ny fitoerana masina indrindra ny mpisoronabe, amin'ny anaran'ny fahotana, dia nodorana teny ivelan'ny toby.
13:12 Noho io, Jesosy, koa, mba hahamasina ny olona amin'ny rany, niaritra teny ivelan'ny vavahady.
13:13 Ary noho izany, aoka isika hivoaka ho any aminy, ivelan'ny toby, mitondra ny latsa izay nentiny.
13:14 Fa eto amin'ity toerana ity, isika tsy manana tanàna maharitra mandrakizay; fa tsy, mitady ny iray amin'ny ho avy.
13:15 Noho izany, alalany, aoka isika hanatitra ny fanati-piderana amin'ny alalany ho an'Andriamanitra mandrakariva, dia ny vokatry ny molotra niaiky ny anarany.
13:16 Fa aza vonona ny hanadino asa tsara sy ny fiombonana. Fa Andriamanitra no mendrika ny fanatitra toy izany.
13:17 Maneke ny mpitarika sy ho nankatò azy ireo. Fa izy miambina ny anao, toy ny hoe ny ampamoaka ny fanahinareo. Koa dia, Mety ho izy ireo hanaovany izany amin'ny fifaliana, fa tsy amin'ny fisentoana. Raha tsy izany, dia tsy ho toy hanampy anao.
13:18 Mivavaha ho anay. Fa izahay matoky fa manana feon'ny fieritreretana madio, raha vonona ny hitondra tena tsara amin'ny zavatra rehetra.
13:19 Ary Miangavy anao aho, vao mainka rehetra, hanao izany, ka mba ho haingana niverina tany aminao.
13:20 Dia enga anie ilay Andriamanitry ny fiadanana, izay nitondra tamin'ny maty fa lehibe ny ondry Pastor, Tompontsika, dia Jesosy Kristy, amin'ny ran'ny fanekena mandrakizay,
13:21 Izy anie hahatanteraka anareo amin'ny fahatsarana rehetra, mba hanao ny sitrapony. Enga anie izy hanatanterahana ao anatinareo izay ankasitrahana eo imasony, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ho Azy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen.
13:22 Ary Miangavy anao aho, rahalahy, mba mamela izany teny fampiononana, indrindra fa satria efa nanoratra ho anao teny vitsy.
13:23 Aoka ho fantatrareo fa Timoty rahalahintsika efa afaka. Raha tonga tsy ho ela, dia hahita anareo aminy.
13:24 Manaova veloma izay rehetra mpitondra anareo sy ny olona masina rehetra. Ireo rahalahy avy any Italia manao veloma anareo.
13:25 Ny fahasoavana anie ho aminareo rehetra. Amen.